एकै दिन रिलिज भएका ‘बटरफ्लाई’ र ‘राज्जा रानी’का गीत, कुन हिट? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
एकै दिन रिलिज भएका ‘बटरफ्लाई’ र ‘राज्जा रानी’का गीत, कुन हिट?
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १६:०६ 8
केही दिन अघि मात्रै छायाकंन सकिएको सिनेमा‘बटरफ्लाई’को पहिलो गीत ‘म गाउँदिन अब गीत गजल’ बोलको गीत शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरियो । अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा संगीतमा सुगम पोखरेल र अन्जु पन्तको आवाज रहेको यस गीतमा सिनेमाका मुख्य कलाकार आर्यन अधिकारी र प्रियंका कार्कीलाई फिचर गरिएको छ । छायाँकार सुरेश बज्राचार्यले दोलखाको मुडेका सुन्दर दृश्यहरुलाई भिडियोमा निकै आकर्षक तरिकाले कैद गरेका छन् जसलाई दर्शकले पनि रुचाएका छन् । तर भ्युअर्सको आधारमा हेर्ने हो भने गीतलाई भने युट्युब दर्शकको खासै माया मिल्न नसकेको देखिन्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म यस गीतलाई एक लाख ३७ हजार भन्दा धेरै पटक मात्र हेरिएको छ ।
ओम प्रतिक गुरुङको निर्देशन रहेको ‘बटरफ्लाई’ मार्फत प्रियंकाले आर्यनसँग पहिलो पटक पर्दा बाँडेकी हुन् । यस अघि आर्यनले ‘के म तिम्रो हैन र? मा काम गरेका छन् । सिनेमाले पौष २८ लाई प्रदर्शन मिति तोकेको छ ।
त्यस्तै शुक्रबार नै रिलिज भएको ‘राज्जा रानी’को ‘चिपक चिपक’ बोलको गीतलाई दर्शकले रुचाएका छन् । केकी अधिकारी र नाजिर हुसैनलाई फिचर गरिएको यस गीतलाई फरक स्वाद भएको राम्रो गीत भन्दै धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । यो समाचार तयार पार्दा सम्म यस गीतलाई २ लाख भन्दा धेरै पटक हेरिएको छ । भ्युअर्सको हिसाबले यो गीत ‘बटरफ्लाई’को गीतभन्दा हिट भएको छ । यस गीतमा नरहरी प्रेमी र सुमिना लो को आवाज छ भने दीपक शर्माको संगीत र राजेन्द्र थापाको शब्द । सिनेमा पौष २१ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । सिनेमालाई यम थापाले निर्देशन गरेका छन् भने रमेश एम के पौड्याल र आर्यन पौड्यालले निर्माण ।